Sheekh Cali Dheere, ayaa sheegay inay xoogaggoodu weli ku sugan yihiin gudaha magaalada Kismaayo, wuxuuna warbaahinta caalamka ku eedeeyay inay baahiyeen warar been ah oo aanay waxba ka jirin, iyaguna aysan ka bixin Kismaayo, ayna difaaci doonaan.
"Mujaahidiintu waxay ku taagan yihiin ballantii lagu wada-galay difaaca shareecada Islaamka iyo sharafka muslimiinta ku nool dagaannada Jubbooyinka," ayuu Sheekh Cali Dheere ku sheegay shirkiisa jaraa'id.
Afhyeenku wuxuu beeniyay in xalaad kacsanaan ah ay ka jirto Kismaayo, isagoo ku sheegay xaaladda Kismaayo mid daggan ganacsiguna uu si caadi ah uga socdo, wuxuuna ugu baaqay shacabka Jubbooyinka inay qayb ka hortagga duullaan uu sheegay inay magaaladaas kusoo qaaday dowladda Kenya.
Afartii maalmood ee ugu dambeeyay dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidamada Kenya kuwa dowladda Soomaaliya iyo Al-shabaab ayaa ka dhacay inta u dhexeysa degmada Afmadow iyo degmada Kismaayo, iyadoo dagaalladaas ay guulo waaweyn ka sheegteen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya.
Goobjoogayaal ku sugan magaalada Kismaayo ayaa sheegay in Al-shabaab ay isaga baxday Kismaayo kuwii dowladda iyo Kenyana aysan gaarin, iyagoo xusay inay ka jirto degmadaas cabsi weyn dadkuna ay barakacayaan.
"Qoysaskii ku noolaa degmada way barakaceen, waayo qof walba cabsi ayaa haysa, ganacsatada intooda badan way barakaceen, xitaa waxaan weynay meel aan caruurta caano uga iibsanno," ayay tiri haweenay barakacaysay oo la hadashay BBC-da.
Magaalada Kismaayo oo 500-km dhinaca Koonfureed ka xigta Muqdisho ayaa waxaa tan iyo sannadkii hore duqeymo duqeynayay diyaarado dagaal iyo maraakiib ku sugan xeebta badweynta Hindiya.